IManualidades On iyiwebhusayithi ezinikele emhlabeni we-DIY lapho siphakamisa khona imibono eminingi yokuhlobisa neyangempela ukuthi uzenzele yona. Ukukusiza, iqembu lewebhu lenziwe ngabantu abanentshisekelo abafuna ukwabelana ngolwazi lwabo namakhono abo emhlabeni wezobuciko.
El Ithimba lokuhlela lezandla livuliwe Ibhalwe ngababhali abalandelayo kepha uma nawe ufuna ukuba yingxenye yayo, unganqikazi ukukwenza sibhale ngale fomu elandelayo:
Njengoba ngikhumbula ukuthi bengikuthanda ukudala ngezandla zami: ukubhala, ukudweba, ukwenza imisebenzi yezandla ... ngifunde umlando wobuciko, ukubuyisela kabusha nokongiwa kwemvelo manje sengigxile emhlabeni wokufundisa. Kepha ngesikhathi sami sokuphumula ngisakuthanda ukudala futhi manje sengikwazi ukuhlanganyela okunye kwalokho kudalwa.
Ngingumthandi omkhulu wobuciko nobuciko kusukela ebuntwaneni bami. Mayelana nezinto engizithandayo, kufanele ngisho ukuthi ngithembekile ngokungenamibandela khekhe nezithombe, kodwa futhi ngiyakuthanda ukufundisa wonke amakhono ami ezinganeni nakubantu abadala. Kuyathokozisa ukukwazi ukwenza izinto eziningi ezingenziwa ngezandla zethu futhi ubone ukuthi ukuqina kwethu kungafika kude kangakanani.
Nginobuciko ngokwemvelo, ngithanda konke okwenziwe ngezandla futhi ngiyakuthanda ukusebenzisa kabusha. Ngiyakuthanda ukunikeza impilo yesibili kunoma iyiphi into, ukuklama nokwakha konke ongakucabanga ngezandla zami. Futhi ngaphezu kwakho konke, funda ukusebenzisa kabusha njengomgomo wempilo. Isiqubulo sami ukuthi, uma singasakusebenzeli, sisebenzise futhi.
Akukho okunikeza ukwaneliseka okwedlula ukubona ubuciko bakho obuphelile. Kuwumdlalo wokuzilibazisa ohlekisayo nowokudala. Bheka ukuhlanganiswa kwami ​​​​futhi uqale ukuzijwayeza amakhono akho. Uzoba nenjabulo!
Igama lami nginguMarian, ngafunda ukuhlobisa nokwakhiwa kwangaphakathi. Ngingumuntu okhuthele othanda ukudala ngezandla zami: ukupenda, ukunamathisela, ukuthunga ... Bengihlala ngithanda imisebenzi yezandla futhi manje ngiyabelana ngayo nawe.
IBachelor of Music History and Sciences, classical guitar uthisha nediploma ekufundiseni ngomculo. Kusukela ngisemncane benginothando lwezobuciko. Umbala ungenye yemininingwane yami yokuzazisa. Ngenza okokufundisa kwi-inthanethi ukuze abantu abaningi babelane ngothando lwabo lokudala nami.
Umbhali, umhleli nengcweti yebhulogi nesiteshi se-YouTube "i-El Taller de Ire", edala okuqukethwe mayelana ne-DIY, ubuciko nemisebenzi yezandla. Ukusebenza ngamatshe amakhemikhali, ukudala imikhiqizo yobuciko ngale ndlela yezitolo zokuhlobisa, nakubumba lwe-polymer nenhlama eguqukayo, ukwakha nokusebenza iminyaka engaphezu kwengu-2 yeJumping Clay.
Bengihlala ngithanda imisebenzi yezandla njengoba ngizithatha njengomuntu onekhono. Kuyangijabulisa ukuthi ngezinsizakusebenza ezimbalwa ungenza kanjani izinto ezinkulu.
Ukusuka eRosario, e-Argentina, ngiqale cishe ngengozi ukukhiqiza okuqukethwe kwewebhu ngenkathi ngiphishekela iziqu zami zomthetho. Ngithanda imisebenzi yezandla ngisemncane kakhulu, futhi njalo ngibanikeze impilo yesibili kulokho obekuzolahlwa.
Ngingumuntu onamandla, osebenzayo futhi oguquguqukayo. Ngithanda ukubhala futhi nginikele engikudalile ku-Blog, ngoba ngaleyo ndlela, ngiyabelana nalabo abanjengami abathanda ubuciko.
Ukudala kungokwemvelo, futhi ukucabanga kusenza sikwazi ukudala. Ngiyethemba ukuthi indalo yami ikunikeza imibono, futhi ikuthinta ukwenza impilo yakho ibe ngeyakho. Ngoba uma sisekhaya lethu, siyethemba ukubona ukubonakaliswa kokuvezwa kobuyena.